မော်ဒယ်ဘဝတုန်းက ပရိတ်သတ်တွေ မသိသေးတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီး ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့ ဘေဘီမောင်… – Cele Oscar
မော်ဒယ်ဘဝတုန်းက ပရိတ်သတ်တွေ မသိသေးတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီး ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့ ဘေဘီမောင်…
May 7, 2021 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီး ရေ ဘဘေီမောငျ က တော့ မျောဒယျ ဘဝကနေ အနုပညာ လမျးကွောငျး ပျေါသို့ တဖွညျးဖွညျး ရောကျရှိ လာသူ ပါနျော။ ဒီနေ့ ဒီခြိနျ မှာတော့ နာမညျရ သရုပျဆောငျ အဖွဈ လူသိ မြားလာ ပါပွီနျော။ အာဏာသိမျးခံရစဉျ အစပိုငျးမှာ တော့ နှဦေး တျောလှနျ ရေးတှငျ ပါဝငျ ခဲ့ပွီး အခုမှာ တော့ တညျငွိမျနတေဲ့ ရပွေငျ ပမာ တိတျဆိတျ ငွိမျသကျ နပေါတယျနျော။
တဈခြို့ ပရိသတျတှေ ကတော့ တျောလှနျ ရေးကို ဟနျဆောငျ လုပျပွခဲ့ တယျလို့ ဝဖေနျ နကွေ ပါတယျနျော။ ဘုရား တရားတှေ နစေ့ဉျ လုပျနပွေီး မွနျမာ ပွညျသူ ပွညျသား တှေ ငွိမျးခမျြး ပါစလေို့ ဆုတောငျး ပေး နသေူ ဘဘေီမောငျ ရဲ့ နောကျကှယျ မှာတော့ ရှုပျထှေး ပှလေီ လှတဲ့ ဇာတျလမျးတှေ ရှိနခေဲ့ ပါတယျနျော။
မျောဒယျ ဘဝတုနျးက ပှခေဲ့ ရှုပျခဲ့တဲ့ ဓာတျပုံတှေ လူမှု ကှနျယကျမှာ ပွနျ့နှံ့ နပေါ တယျနျော။မြားလိုကျတဲ့ လငျဆိုတာ ထကျထကျမိုးဦး တောငျ အရှုံးပေးရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘဘေီမောငျ ကတော့ ခွူစားတာ တောငျအဆငျတှေ ကိုပဲ ပတျခွူ တာနျော နငျတျောတျော အကောငျးကွိုကျတယျ လို့ ပရိသတျ တဈဦးမှ ပွောကွားထားပါသေးတယျနျော….
ပရိသတ်ကြီး ရေ ဘေဘီမောင် က တော့ မော်ဒယ် ဘဝကနေ အနုပညာ လမ်းကြောင်း ပေါ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ရောက်ရှိ လာသူ ပါနော်။ ဒီနေ့ ဒီချိန် မှာတော့ နာမည်ရ သရုပ်ဆောင် အဖြစ် လူသိ များလာ ပါပြီနော်။ အာဏာသိမ်းခံရစဉ် အစပိုင်းမှာ တော့ နွေဦး တော်လှန် ရေးတွင် ပါဝင် ခဲ့ပြီး အခုမှာ တော့ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ရေပြင် ပမာ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက် နေပါတယ်နော်။
တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေ ကတော့ တော်လှန် ရေးကို ဟန်ဆောင် လုပ်ပြခဲ့ တယ်လို့ ဝေဖန် နေကြ ပါတယ်နော်။ ဘုရား တရားတွေ နေ့စဉ် လုပ်နေပြီး မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား တွေ ငြိမ်းချမ်း ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေး နေသူ ဘေဘီမောင် ရဲ့ နောက်ကွယ် မှာတော့ ရှုပ်ထွေး ပွေလီ လှတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိနေခဲ့ ပါတယ်နော်။
မော်ဒယ် ဘဝတုန်းက ပွေခဲ့ ရှုပ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ လူမှု ကွန်ယက်မှာ ပြန့်နှံ့ နေပါ တယ်နော်။များလိုက်တဲ့ လင်ဆိုတာ ထက်ထက်မိုးဦး တောင် အရှုံးပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေဘီမောင် ကတော့ ခြူစားတာ တောင်အဆင်တွေ ကိုပဲ ပတ်ခြူ တာနော် နင်တော်တော် အကောင်းကြိုက်တယ် လို့ ပရိသတ် တစ်ဦးမှ ပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်….
ငွေးကြေးမပြည့်စုံ ပဲဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့် မကြွေသင့်ပဲ ကြွေသွားခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး အတွက် ဝမ်းနည်းမဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း
ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒွေး ရဲ့ မွေးနေ့အားရည်စူးကာ ကောင်းမှု့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း